Wararka Maanta: Isniin, Jun 25, 2012-Xaalado nolol xumo oo ka Taagan Degmada Badhaadhe iyo deegaanada ku dhow dhow ee Gobolka Jubada Hoose
Nabadoon Max'ed C/llaahi oo kamid ah dadka ku dhaqan Degmada Badhaadhe ayaa HOL u sheegay in degmada Badhaadhe iyo deegaanada ku xeeran ay ka jiraan dhibaatooyin nolol xumo oo aad u liita, isagoona sheegay in dagaallo soo noqnoqday iyo abaarihii ku dhuftay gobolka ay sababeen in ay ku ceertoobaan boqollaal qoys oo ku dhaqnaa halkaasi.
"Degmada Badhaadhe iyo deegaanka Kulbiyow waxa ku dhaqan qoysas fara badan oo ay ku adagtahay in ay helaan raashiinka quutul duruuriga ah, waxaa jiro qoysas badan oo kusoo barakacay degmada Badhaadhe kuwaasoo aan ilaa imika helin wax dib u dejin ah," ayuu Nabadoonku hadalkiisii ku daray.
Sidoo kale Nabadoon Max'ed C/lllaahi ayaa sheegay in hadii aan kaalmo deg-deg ah lala soo gaarin qoysaskan ku dhibaateeysan degmada Badhaadhe iyo deegaanada ku xeeran in ay xaaladooda nololeed kasii dari doonto.
Saraakiisha dowladda KMG ee gobolka Jubada Hoose ayaa dhawaan ugu baaqay hay'adaha samafalka in ay kaalmo lasoo gaaraan dadka ku dhibaateeysan gobolka, iyadoogoona sheegay in ay damaanad qaadi doonaan ammaankooda.
Gobolka jubada hoose oo kamid ah gobollada dalka Soomaaliya ee ay sida ba'an u saameeysay abaartii ku dhufatay dalka Soomaaliya, ayaa waxa isku horfadhiyo Xoogagga Xarakada Al-shabaab iyo ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Raaskaambooni oo kaashanaya Militariga Kenya, waxaana had iyo jeer ka dhaca dagaallo dhexmara dhinacyadaasi.
6/25/2012 8:31 AM EST